कोरोना अस्पताललाई सहयोग
By vijayafm on	 March 26, 2020 देश, फोटो फिचर, विविध खबर, स्थानीय
चितवन, १३ चैतः
लायन्स क्लब ईन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ३२५ बि टु ले भरतपुरमा हालै संञ्चालनमा आएको भरतपुर कोरोना बिशेष (अस्थाई) अस्पताललाई अत्याबश्यक सामाग्रीहरु आज उपलव्ध गराएको छ । क्लबका भाईस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर रामप्रसाद भट्टले भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख एबं अस्पतालका संयोजक रेनु दाहाललाई ती सामाग्री हस्तान्तरण गर्नु भएको हो ।
क्लबले ५० थान पिपिई र ५० लिटर सेनिटाईजर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको हो । भट्टका अनुसार ती सामाग्रीको मूल्य रु तीन लाख भन्दा वढि पर्दछ । सामाग्री हस्तान्तरण गर्दै उहाँले अत्याबश्यक भएकाले तत्काल यी सामाग्री उपलव्ध गराएको र आगामी दिनमा आबश्यकता अनुसार थप सहयोग गर्दै जाने प्रतिबद्यता व्यक्त गर्नुभयो । सामाग्री ग्रहण गर्दै महानगर प्रमुख दाहालले यो अभियान साझा अभियान भएकाले सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
अस्पतालका सदस्य सचिब डा. भोजराज अधिकारीले अहिलेका अत्याबश्यक सामाग्रीहरु प्रदान गरेकोमा लायन्स क्लवलाई धन्यवाद दिदै यस अभियानमा जुट्न सबैमा आव्हान गर्नुभयो । सामाग्री हस्तान्तरण गर्न भट्ट संगै क्लबका चिफ एड्भाईजर सिद्धार्थलाल चुके, दिननाथ न्यौपाने, सिनियर एड्भाईजर डा. शारदा कँुवर, बागेश्वरी लायन्सका पूर्ब अध्यक्ष पूर्णबहादुर श्रेष्ठ र नारायणगढ लायन्सका अध्यक्ष निरज श्रेष्ठ अस्पताल पुग्नु भएको थियो ।
अस्पताललाई यस अघि सिजि फाउण्डेसनले १० थान पिपिई उपलव्ध गराएको थियो ।